फोक्सो | Nagarik News - Nepal Republic Media
सुर्तीजन्य पदार्थ र फोक्सो स्वास्थ्य
खल्तीमा चुरोट, हातमा खैनी, मुखमा हुक्का छ सल्किँदै जान्छ रहर हाम्रो जीवन सुक्खा छ।
नागरिक १० फाल्गुन २०७६ शनिबार २ मिनेट पाठ
फोक्सोमा एडिनोकार्सिनोमा बढिरहेको छ
–फोक्सोमा क्यान्सर हुनुको ९० प्रतिशत कारण चुरोट हो। त्यसपछि १० प्रतिशत कारणमा प्रदुषण,औधोगिक प्रदुषण,सवारी साधनवाट निस्कने प्रदुषण,रेडियशन,एक्सरे,युरेनियम कारखानामा काम गर्नेहरुमा पनि फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ। एचवेस्टर (आगो निरोधक)को कणमा सम्पर्क हुँदा पनि क्यान्सर हुन्छ।
नागरिक १८ माघ २०७६ शनिबार १५ मिनेट पाठ
नागरिक ९ कार्तिक २०७६ शनिबार ४ मिनेट पाठ
तीन सय बढी क्षयरोगका बिरामी
रोल्पा - रोल्पामा हरेक वर्ष ३०० बढी क्षयरोगका बिरामी देखिने गरेका छन्। यस्ता बिरामीमध्ये ९० प्रतिशत बढी उपचारपछि निको हुने गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका अनुसार जिल्लामा १८७ यस्ता बिरामीमा खतरनाक कीटाणु देखिएको छ। यसैगरी फोक्सोमा क्षयरोग भएका ३३ बिरामीले उपचार गराएका छन्। तीन बिरामीको भने अन्य अङ्गमा यस्तो रोग देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाकासूचना अधिकारी नोखराज पोखरेलले जानकारी दिए।
नागरिक २४ वैशाख २०७६ मंगलबार १ मिनेट पाठ
श्वास–प्रश्वास तथा फोक्सोसम्बन्धी रोगीका लागि जाडो मौसम अत्यन्तै कष्टकर मानिन्छ। यस्ता रोगीले यो मौसममा कसरी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने ? नेपालमा श्वास–प्रश्वास एवं फोक्सोसम्बन्धी रोग उपचारको अवस्था कस्तो छ ? प्रस्तुत छ– नागरिककर्मी पवित्रा सुनारले काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालको चेस्ट क्लिनिकका प्रमुख डा.अशेष ढुंगानासँग गरेको कुराकानीः
पवित्रा सुनार २२ मंसिर २०७५ शनिबार १८ मिनेट पाठ
वायु प्रदूषणको विरुद्धमा साझा संकल्प लिने प्रयत्नका साथ सञ्चालन भइरहेको साताव्यापी अभियान ‘मास्कमाण्डु हैन हामीलाई काठमाडौँ चाहिन्छ’ भन्दै बुधवार समापन गरिएको छ ।
नागरिक २ फाल्गुन २०७४ बुधबार २ मिनेट पाठ
घरवरपर वा सडक सफा राख्न धेरैले जानेको काइदा हो, वरपरको फोहोर जम्मा गरेर बालिदिने । त्यसमा पनि चिसो बढेसँगै आगो ताप्न फोहोर पनि बाल्ने क्रम बढ्छ । तर, यसले वातावरण प्रदूषित बनाई स्वास्थ्यसमस्या निम्त्याउने क्रम पनि बढेको छ। जनस्वास्थ्य तथा वातावरणविद्का अनुसार उपत्यकामा घरबाहिरका फोहोर बाल्ने यही प्रचलन वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारण बन्दै गएको छ।
दीपक दाहाल २० मंसिर २०७४ बुधबार ९ मिनेट पाठ